ဖိလစျကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေများအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ - သင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းယနေ့တွင် Upload လုပ်ပါ! 🥇
ဖိလစျအတှကျအဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ် ပြည်ပရောက် ဤသည်စီးတီးဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အလွန်ရေပန်းစား ဦး တည်ရာဖြစ်ပါတယ်။ များစွာရှိပါသည် ယူအေအီးကူးလာသူကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဖိလစ်ပိုင်အမှုဆောင်အရာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကောင်းကိုအသိရှိသည်။ အတူတူကောင်းသောပညာရေးနှင့်အတူ။ သူတို့က အလွယ်တကူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီ။ လူအပေါင်းတို့သည်ဖိလစ်ပိုင်အထက်ယခုတရားဝင်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးရှိ Philipines ကနေကျော်ပျံသန်းဖို့ခက်ခဲမှမရှိပါ။ အဖြစ်မှန်တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အအရှေ့တောင်အာရှ။ ဒါကြောင့်လည်းဝေးဒူဘိုင်းမြို့ကနေမဟုတ်ပါဘူး။ နှင့်အခြားစကား, ဖိလစျမှလူများမှာ အလုပ်အကိုင်အဘို့အယူအေအီးအတွက်ကြိုဆိုပါတယ်.
ဒါဟာတိုင်းပြည်အနောက်ပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိတည်ရှိသည်။ အဲဒီအကြောင်း 7,641 ကျွန်းများပါဝင်သည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်တစ်ဦးတိုးရစ်အဖြစ် Philipines သွားရောက်ချင်ပါတယ်လျှင်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, အလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံး အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအနေဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ သူတို့စော်ဘွားတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရနိုင်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ နီးပါး 14,000 ရှာဖွေမှုများကိုရှိပါတယ်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ အင်တာနက်ကိုအလုပ်တွင်ကျယ်စွာအပေါ်လတ်ဆတ်တဲ့။ ဒူဘိုင်းဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကနေရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်း။
ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ယခုကြှနျုပျတို့များမှာ သငျသညျကူညီပေးနေစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာထည့်ထားခံရဖို့။ သငျသညျဖိလစျအတွက်အလုပ်ရှာဖွေနေကြသည်အထူးသဖြင့်ပါ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီထက်ပိုငါးဆယ်ထောင်ပေါင်းများစွာကူညီပေးခဲ့တယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများမှ Uber ယာဉ်မောင်းအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်စစ်တမ်း။ ငါတို့သည်အထူးကု check လုပ်ထားကြပါပြီထောက်ပြ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှအလုပ်ရှာဖွေသူများဖြစ်သည်။ ၏ကျယ်ပြန့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းလိမ့်မည် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် စော်ဘွားကုမ္ပဏီများသည်ကြီးပြင်းခဲ့ကြ။ ထိုအ 2018 ၎င်းတို့၏စုဆောင်းမှုလှုပ်ရှားမှုများကောင်းစွာသိကျွမ်းဖြစ်လာသည်။ ထိုသည်ဤအာရှလုပ်သားများအပေါ်အခြားတစ်ဖက်အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်။ ဖြစ်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်း rated ကုမ္ပဏီများကအလုပ်.
ရေရှည်မှာမှာတော့ပါရမီ လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အခြို့သောစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်။ ယူအေအီးအတွက် HR မန်နေဂျာများ၏ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ နှောင့်နှေးစော်ဘွားမရှိရင်အလုပ်ရှင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ် ယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများနေရာအလုပ်အကိုင်ရည်ရွယ်ချက်များ။ 2018 မှစ. 2020 မရောက်မှီတိုင်အောင်, နှစ်ဦးစလုံးလတ်ဆတ်ဆွဲဆောင်အားဖြင့်ဘွဲ့ရခဲ့သည်။ နှင့်ဖိလစ်ပိုင်ပညာရှင်များပင်လယ်ရပ်ခြားမှအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိ။ နှင့်သင်တန်း၏ foreground အတွက် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့၏အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမျိုးအစား စော်ဘွားအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ နီးပါးတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက် ဒူဘိုင်းကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အတွက်.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ဖိလစျအလုပ်သမားများ MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ။ ဒါပေမယ့်ဟိုမှာကနေရုတ်တရက်လုပ်သားများအားလုံး။ ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထွက်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစျေးကွက်အတွက်စီးပွားဖြစ်ကြံထက်။ ဖိလစျအတှကျအဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်ကဒီသစ်ကိုပြည်တော်ပြန်များအတွက်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
POEA ကယောဘဌားရမ်း - ဖိလစ်ပိုင်ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအုပ်ချုပ်ရေး
အဆိုပါမှတ်ချက်ပြုထားသည်အဖြစ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့၏မြတ်သောလမ်းကို POEA ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အစိုးရအေဂျင်စီပညာရေးဆက်လက်ဟောပြောသည်။ အစဉ်အမြဲကြိုးစားနေခြင်းနှင့်အေဂျင်စီစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရေခြားမြေခြားအလုပ်အကိုင်နှင့်အတူအကူအညီ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒူဘိုင်းဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကနေရွှေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအစိုးရအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများကိုအသုံးပြုနေသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိစွန့်စားမှုရှိလိမ့်မည် သငျသညျစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ.
POEA ကယ့်ကိုဒူဘိုင်းအတွက် HR အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်တကွသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အဖြစ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးလောကမှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှိသမျှနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အလျင်အမြန်ဖြစ်လာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိသူတို့အခွအေနေအစိုးရလက်အောက်တွင်။ 2019 အတွက်အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာစမတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူမျိုး၏မျိုးဆက်ဖြစ်လာသည်။ နှင့်လျောက်ပတ်သောအလုပ်အကိုင်များဘို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖိလစ်ပိုင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကူညီပေးသည်။ တစ်ဦးရရှိရန် အထူးသဖြင့်စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းအတွက်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, သငျသညျ POEA ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထိုသူတို့ကသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အသေးစိတျမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ နှင့်ဖိလစ်ပိုင်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစား ဒူဘိုင်းအတွင်းအပြင်.
ဒူဘိုင်းအတွက် Poea အလုပ်အကိုင်များ 2020 အတှကျလမျးပျေါတှငျဖြစ်ကြသည်။ ဒီယူအေအီးအတွက်စစ်မှန်တဲ့အစိုးရဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ ကျိန်းသေဒူဘိုင်းအတွက်ဖိလစ်ပိုင်လုပ်သားများကူညီပေးနေ။ ဖြစ် စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များအတွက်နေရာချ POAE အတူ။ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ခွဲခြား၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ သငျသညျစော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစားဖိလစ်ပိုင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်။ သငျသညျဖိလစ်ပိုင်ပြည်ပကိုဆက်သွယ်သည့်အခါလည်းရရှိနိုင်ဖြစ်လာ အလုပ်အကိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ရုံး။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ယခုစမတ်မြို့ရှိခြင်း။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်လာ အာရှအလုပျသမားမြား၏ခရီးစဉ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ပင်လယ်ရပ်ခြားဖိလစျကျွမ်းကျင်သူများ။ ရိုးရှင်းစွာအစော်ဘွားပြောင်းရွှေ့ဖို့ချစ်ကြတယ်။ အဲဒါကိုလာမယ့်သာဆော်ဒီအာရေဗျရှိပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, POEA အလုပ်အဖွင့်များများရှိပါတယ်။ 2018 ဘို့အထိ ဒူဘိုင်းအတွက် 2020 ကုန်စည်ပြပွဲဂျော့ဘ်.
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်, သင်ကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ် လူအင်အားအေဂျင်စီများနှင့်အလုပ်အကိုင်က်ဘ်ဆိုက်များစာရင်း။ ထိုသင်ကူညီသင့်ပါတယ်။ ယူအေအီးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးဖြစ်လာသည်။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ။ နှင့်ကုမ္ပဏီများ placements အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အမှုဆောင်အရာရှိရုံးများ၏ကွန်ယက်မှာကြည့်ရှိသည်။ တဖန်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျတဲ့သူအထူးကု။ အဆိုပါဖြစ်လာဖို့ Filipines ထံမှအရည်အချင်းပြည့်လုပ်သား.
လောလောဆယ်ဖိလစ်ပိုင်ရှာဖွေစုဆောင်းယူအေအီး client များအနေဖြင့်မရရှိနိုင်အလုပ်အမိန့်ရှိသည်။ ဖိလစျကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဘာမျှမပြောပါရန်။ အဘယ်သူသည်ပြီးသားအလုပ်တစ်ခုရှိတယ်7စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေခြင်းအားဖြင့်, သူတို့ရုံစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများမှတိုက်ရိုက်မေးလျှောက်။ ထိုကိစ္စတွင်ထိပ်တန်း-rated စုဆောင်းမှုကိုသင် POAE အတွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်လူအင်အားအေဂျင်စီများစာရင်း။ ထို့အပြင်ဂျော့ဘ်အတွက် ဖိလစျအတှကျအဒူဘိုင်း တံခါးအကြောင်းကိုထွက်ရှာပါ။ အဆိုပါ 7th စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်သင်၏လျှောက်လွှာကိုစတင်။
သင်ရုံဒူဘိုင်းရောက်ရှိလာခဲ့လျှင်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းအံ့သြနေကြတယ် တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့။ ကြောင်းလုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်မှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးအကွံဉာဏျ နှင့်စျေးကွက်များအတွက်နည်းလမ်းတွေသင်ကိုယ်တိုင်။ ပညာရှင်ပီသစွာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုအသုံးဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာမည် ယူအေအီး၌ထားရမည်.
နောက်ထပ်စမတ်စိတ်ကူးဖို့ဖြစ်ပါတယ် jဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လမ်းညွှန် oin။ သင်သည်အခြားပြည်တော်ပြန်နှင့်အတူအတွေးအခေါ်များဖလှယ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာယူအေအီးအတွက်မန်နေဂျာငှားရမ်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကြှနျုပျတို့၏ website မှဧည့်သည်များ စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးလာရောက်ပူးပေါင်း။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်လည်းမန်နေဂျာငှားရမ်းထံမှနေ့စဉ်တောင်းဆိုမှုကိုစစ်ဆေးလိုနေကြသည်။ ဤနည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်ယူအေအီးအတွက်ဖိလစ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်အလုပ်အကိုင်ရတဲ့။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျဖြစ်လာမှရှာဖွေနေလျှင် တစ်ဖိလစ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်သူများ ဒူဘိုင်း၌တည်၏။ သငျသညျကျိန်းသေစစ်ဆေးသင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်း rated ငှားရမ်းကုမ္ပဏီများမှ။ နောက်တစ်နှစ်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ခုနှစ်တွင်အောင်မြင်မှုသော့ချက်ဖြစ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျဖိလစျကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအကြောင်းကိုအကြံဉာဏ်ကောင်းရနိုင်သည်။ ထိုအခါသင်၏ CV ကိုစေလွှတ် အသစ်ကအလုပ်အကိုင်ရိုးရှင်းစွာရှာတွေ့.
သို့သော်ငြားလည်း, ကျွမ်းကျင်သူများဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်မှာကြည့်လည်းစိတ်တော်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် ဒူဘိုင်းမှအလုပျအတှကျပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘယ်လို။ ယူအေအီး၏မြို့တော်အတွက်အလုပ်အကိုင်အရယူခြင်းသင်သံသယထက်အများကြီးပိုအားထုတ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်အများစုမှာယူအေအီးကျော်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေတာ ကျွမ်းကျင်သူများအတှကျအခကျြ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်အွန်လိုင်း applications များသန်းပေါင်းများစွာပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ သင်တို့မူကား, မန်နေဂျာများငှားရမ်းမတှေ့နိုငျပါ။ ကျိန်းသေ, သငျသညျမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမရလဒ်ကိုနှင့်အတူသင်၏အချိန်ကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရယူခြင်း ထိုကဲ့သို့သောကိုလန်ဘိုအလုပ် site ကိုအဖြစ်လူမှုရေး applications များပေါ်။ ဒါဟာအတော်လေးလူကြိုက်များအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည် ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ နှင့်ပြည်တော်ပြန်များအတွက် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေကြသူအိန္ဒိယအနေဖြင့်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနေ့တိုင်းဒူဘိုင်း၎င်းတို့၏နေအိမ်နိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့။ ဒီတော့ဖိလစ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ဒူဘိုင်း၌ဤအလုပ်အကိုင်များရတဲ့ကမလွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်အလုပ်အကိုင်အရယူခြင်းသင်ရနိုင်အပြုသဘောဘက်မှာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရန်အခြားသောစမတ်လမ်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့။ ဒါကကဏ္ဍဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်စူပါအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဖိလစျပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလှသောဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူတိုင်းသိတယ် ယူအေအီး၏မြို့တော်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့ဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းပါတယ်။ သငျသညျဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့ကာတာအတွက်အကောင်းနှင့်ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့သော်အများဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားလူကြိုက်များကဏ္ဍများ ထိုကဲ့သို့သောဖိလစျအဖွစျ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်စကားပြော ယူအေအီးအတွက်မော်တော်ယာဉ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဂိုဒေါင်ထဲမှာလိုအပ်ဤမျှလောက်များစွာသောလုပ်သားများရှိပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးအလုပျအတှကျထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများသည်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ခန့် နှင့် ပင်လယ်ကွေ့ငှားရမ်းစုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဆဲပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, အ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖိလစျအလုပျသမားအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာလူမြိုးတစျမြိုးကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဤမျှလောက်များစွာသောအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ပြည်တော်ပြန် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်ရှင်များကရှာတွေ့။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အခြားသူများကိုအကြံပေးဖို့ကြိုးစားနေ။
တစ်ဖိလစ်ပိုင်ကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာဖွေ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း In-တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင်များချဉ်းကပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ စူပါစမတ်စိတ်ကူးသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ် WhatsApp ကို အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေဘို့။ ယူအေအီးသွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအများစုဟာ။ မြင့်မားတဲ့ paid အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေဥပမာမှားယွင်းတဲ့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာလုပ်နေတာ။ နှင့်အဖြစ်မှန်အတွက်အားလုံး သင်ရုံအခြေခံအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များန်ထမ်းအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါသင်သည်တိုးနိုင်ပါတယ် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအခွင့်အလမ်းများများအတွက်။ ကိုယ့်ကိုစတင်မယ့်စူပါစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းသို့ရရှိရန်အခက်ခဲဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ သင်တန်း၏, သည်, ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များအတွက် Google က။ ကိုသတိပြုပါ မိုဘိုင်းဖုန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက် တစ်နေ့တာမှကြီးထွားလာသည်။ ဒါကြောင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အချို့ကိုရှာပါ။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြီးထွားလာသည်ကိုမမေ့ပါနှင့် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ အမြဲတမ်း သငျသညျပြောင်းရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသေချာအောင်.
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိလည်းရှိပါတယ် အခြားမြို့များယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်။ သင်တို့အဘို့အရှာနေနေတယ်ဆိုရင် 2020 အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်းကုမ္ပဏီ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲအထောက်အကူလက်ပေးခြင်း။ ဒူဘိုင်းကနေအဘူဒါဘီနဲ့ရှီးမှတက်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုကျော်စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲရသည်။ ၏သင်တန်းအချို့ကိစ္စများတွင်, ငါတို့သည်လည်းကာတာနိုင်ငံနှင့်ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှကူညီနေတာပါ။ ဥပမာ, အဘူဒါဘီယူအေအီးအတွက်ဆရာအလုပ်အကိုင်များစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်.
ဖိလစျအတှကျအဘူဒါဘီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် အနည်ထိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရာများ။ ဒါဟာဒူဘိုင်းမှနှိုင်းယှဉ်နည်းနည်းစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့မူကား, အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြသူတစ်ခုတည်းသောပြည်တော်ပြန်မဟုတ်သေချာပါစေ။ အိန္ဒိယ, ကာတာပြည်တော်ပြန်။ ထို့အပြင် တောင်အာဖရိကကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, အင်ဒီးယန်းပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေချဲ့ထွင်ရန်စမတ်စိတ်ကူးဖြစ်နိုင်သည်။
အဘူဒါဘီလည်းကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများလုပ်ကိုင်ဖို့ရှိခြင်း။ ကြည့်ဖူး အရှေ့အလယ်ပိုင်း Cryptocurrency အလုပ်အကိုင်များ။ အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများနှင့်ဧည့်သည်များအဘို့အကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသည်။ ဖိလစျအလုပျသမားမြားအတှကျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသင်တို့အဘို့ဖွစျနိုငျပါတယျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီယနေ့ CV ကို Upload လုပ်ပါ။
ယခုကြှနျုပျတို့များမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုစုဆောင်း ဖိလစ်ပိုင်အတွက်
တစ်ဦးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းယောဘ? အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်အလုပ်သမားကိုလည်းစတင်နိုင်ပါသည် အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဒူဘိုင်း! ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာသင်ဆုံးဖြတ်သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ မှ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းကုမ္ပဏီများမှ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီမှတက်။ ကျနော်တို့ရရန်သင့်ကိုကူညီဒီမှာပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအသစ် option ကို.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်းအတွက်အိပ်မက်အဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။